“ဆရာ/ ဆရာမတွေ မကြောက်ကြပါဘူး။ အံ့သြစရာပါပဲ၊ ဒီတစ်ခေါက်အလုပ်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာ၊ ဆရာ/… – PVTV Myanmar
“ဆရာ/ ဆရာမတွေ မကြောက်ကြပါဘူး။ အံ့သြစရာပါပဲ၊ ဒီတစ်ခေါက်အလုပ်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာ၊ ဆရာ/ ဆရာမတွေ ကိုယ်တိုင်က ဂုဏ်ယူပြီးပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ အရင်က အလုပ်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာ ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုလိုပဲ။ အခုကျတော့ အလုပ်ထုတ်ခံရလို့ ပျော်နေကြတယ်၊ ကိုယ့်စာရင်းအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ထဲမှာ ပါမလာမှာကြောက်နေကြတယ်၊ စိုးရိမ်နေကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အချင်းချင်း(စစ်ကောင်စီရဲ့ အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့) အပြန်အလှန် ဂုဏ်ပြုစကားတွေပြောကြတယ်။ အဲ့တော့ CDM ကိုရဲရဲတောက်လုပ်နေကြတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေ၊ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေ အားလုံးဟာ အနာဂတ်နိုင်ငံအတွက် (ဒါမှမဟုတ်) အခုတော်လှန်ရေးကြီးအတွက် တကယ့်သူရဲကောင်းတွေပါပဲ”
Like – 17K Share – 2440
Nan Htwe says:
2021-05-07 at 4:36 PM
2021-05-07 at 5:30 PM
CDM ဆရာ ဆရာမများ အားလုံးကို လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်
2021-05-07 at 5:33 PM
နှင်း မိုး says:
2021-05-07 at 5:35 PM
ဆရာဆရာမ CDM 80%​ကျော်👍
​ကျောင်းသား​CDM 90%​ကျော် ​👍
2021-05-07 at 6:09 PM
အလုပ်ထုတ်ခံ ရတဲ့ ဆရာဆရာမ/ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့ ပေးကြပါ
2021-05-07 at 7:14 PM
ကျမတို့ကလေးကို ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာ ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်ခံ ဘယ်ကျောင်းမှာမှ မထားပါဘူး။ ပြည်သူ့အစိုးရပြန်မလာမချင်း ကျမတို့ မိဘတွေ ကလေးအားလုံး CDM ပါပဲလို့
2021-05-07 at 9:44 PM
ဆရာ၊ဆရာမ နှင့် ကျောင်းသား, ကျောင်းသူ အားလုံး အတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်။ လေးစားပါသည်။ ကျန်းမာကြပါစေ။ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကကင်းဝေးပါစေ။ “လိုရာပန်းတိုင်အမြန်ဆုံးရောက်ကြပါစေ”
We proud to CDM.
Nu Yee says:
2021-05-07 at 10:27 PM
Big congratulations Sayar စိုင္း
Aye Nandar Aung says:
CDM ဆရာ ဆရာမမ်ား အားလုံးကို ေလးစားဂုဏ္ယူ လ်က္ ပါ
December Moe says:
အလုပ်ထုတ်ခံရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယာယီရပ်ဆိုင်းပါ။
2021-05-08 at 11:49 AM
ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်မယ်ဆို ဆရာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အလုပ်ထွက်မယ်လို့ သိရ။
2021-05-08 at 12:15 PM
အပြင်ကျူရှင်ဆရာမ အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာကြာပါပြီ ကိုဗစ်နဲ့ အလုပ် လစာပျက်ခဲ့ပြီး အလုပ်လက်မဲ့့ဖြစ်တာတနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ ဒါမဲ့ စစ်ကျွန်ပညာရေးစနစ်မှာတော့ ဘယ်တော့မှ စာ မသင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ဈေးဘဲရောင်းစားမယ် စီးပွားရေး ခက်ခဲနေပေမဲ့ ပြည်သူအားလုံးနဲ့အတူ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သွားမယ်
လွတဲ့ပန္းတိုင္း ေမႊးပါေစ says:
Ion Tox says:
2021-05-08 at 5:53 PM
CDM is the best weapon.
2021-05-08 at 6:04 PM
2021-05-08 at 6:08 PM
2021-05-08 at 8:52 PM
CDM ဆရာ ဆရာမ မ်ား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား မိဘမ်ားအားလံုးကို ေလးေလးစားစား ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပ ုအပ္ပါသည္ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းကင္းျငိမ္းျကပါေစ
2021-05-08 at 9:58 PM
ဆရာ မိဘ. ​ေက်ာင္​းသား..
စော အေဇက် says:
ချစ် ကြ တယ်။ စာအသင် ပြ လည်းကောင်းတယ်။ စာသင်တဲ့အခါ
တကယ့်စေတနာ အ ပြ ည့်နဲ့သင်တာ။
နိုင်ငံအကျိုးတိုင်းြပည်အကျိုးြပည်သူ့အကျိုးအောင် မြ င်စွာ
Paing Min Shar says:
Tinmoe Htwe says:
စစ်ကောင်စီ အာဏာလုတဲ့ အချိန် ကိုယ့်ရင်သွေးကို ဘယ်မိဘမှစိတ်မချနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်မှာပဲ စာသင်ပါမည်။
Thaung Kywe says:
2021-05-09 at 12:32 PM
2021-05-09 at 11:10 PM
2021-05-10 at 1:33 PM
Oo Pyit says:
ချက်ကလေး ပေါ် says:
2021-05-10 at 3:47 PM
ပန်း သခင် says:
2021-05-10 at 3:52 PM
နင်တို့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှိူင်းရင် မရိုင်းဘူးပေါ့ ခွေးသူတောင်းစားတေ ကျောင်းမထားနဲ့တောင်းစားခိုင်း နင်တို့ကလေးတေကို
2021-05-10 at 3:55 PM
Koko Soe says:
2021-05-11 at 7:03 PM
CDMဆရာဆရာမများကို နောင်တချိန်ပြည်သူ့အစိုးရပြန်တက်လာချိန်ရောက်ရင် ဂုဏ်ထူးဆောင် တော်ဝင်သူရဲကောင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေးသင့်ပါသည်
2021-05-11 at 7:38 PM
ရန္ ရွင္း says: